Liverpool ma la soo wareegi doontaa xiddig khadka dhexe ah?
Tababaraha Liverpool Jurgen Klopp ayaa la weydiiyay hadii uu talaabo u qaadi doono ciyaaryahanka khadka dhexe marka uu furmo suuqa kala iibsiga bisha Janaayo marka ay kooxdiisu u dagaalameyso inay is taageerto ololaha 2020-21.
Kooxda heysata horyaalka Premier League ayaa dhexda uga jirta dhibaato dhanka daafaca ah ka dib markii ay dhaawacyo muddo dheer ah ku waayeen ciyaartoy muhiim ah Joe Gomez iyo Virgil Van Dijk.
Dib ugu soo laabashada weeraryahanka reer Cameroon Joel Matip ayaa la filayay inuu sii wado buuxinta booska mar kale muujiyay sida uu ugu nugul yahay dhaawaca uu isagu laftiisu kujiro kooxda dhawaan.
Klopp ayaa badalay Fabinho oo khadka dhexe ka ciyaarsiiyay booska khadka dhexe isaga oo ay weheliyaan da, yarka Nat Phillips iyo Ryhs Williams.
Haddaba, ka hor kulanka caawa ee Southampton, Klopp ayaa la weydiiyay haddii soo laabashada Matip ay meesha ka saari doonto wararka la isla dhexmarayo ee la xiriirinaya inuu u dhaqaaqayo daafaca, kaasoo sheegay inuu “gabi ahaanba hubin” inuu u dhaqaaqayo.
“Waan ogahay inaysan aheyn wax cusub, had iyo jeer waa,” ayuu yiri Klopp.
“Runtii waxba kama dhihi karo arintaas, laakiin waad qiyaasi kartaa in lix bilood ka hor aan ka wada hadalnay sida ay u dhibtoon doonaan dhamaan kooxaha kubada cagta, waana ku faraxsanahay inaan sii wadan karno, waxayna si fiican u caawisay dhamaan kooxaha.”
“Laakiin ma ahan waqtiga kaliya ee aad …” Klopp ayaa muujiyay dareen dhaqaale kahor inta uusan oran, “uguyaraan anaga, runti ma ogi sida kooxaha kale ay yihiin.”
Within the highlight: the grieving Niger
in Chad, artists take a stand